Kwi-Intanethi | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Kuthekani ukuba umyalezo wephutha ongu-502 uvela?
Ngelixa ukhangela nasiphi na isiza okanye amaphepha kwi-Intanethi, xa ufikelela kwiindawo ezahlukeneyo kwiscreen sokujonga kwakho, unokufumana umyalezo "impazamo 502". Nangona kunjalo awu ...
Uhlobo lwesiza sendawo: unokwenza njani? Uyilo oluphendulayo
Namhlanje, uninzi lwabantu lisebenzisa i-intanethi ngezixhobo zefowuni- iipilisi, iifowuni, kule meko, ukwenziwa kwesiza nako kufikelela kwinqanaba elitsha. Ukuba umsebenzisi undwendwela kwaye ubona ukuba isiza ...
I-EoBot.com: isebenza njani indawo? Uvandlakanyo lwezixhobo zemigodi ye-EoBot.com
Ingeniso engacacanga kwi-Intanethi sisihloko esinomdla kakhulu kuninzi lwabantu abakhe bajonga ithuba lokwenza imali kwi-intanethi. Enye yeendlela zokwenza ingeniso enjalo yimali yezimbiwa. Hayi, intetho ...
Umbuzo obalulekileyo: uyenza njani iqela elivaliweyo "VKontakte"?
Namhlanje abantu abaninzi, ngakumbi isizukulwana esincinci, bakhetha unxibelelwano lokwenyani kunokwenyani. Kwiimeko ezininzi, indawo enkulu yabemi beli isebenzisa amathuba okunxibelelana kwezentlalo. Eyona idumileyo kule meko yiVKontakte. ...
Ukuseta iYandex imeyile kwi-Outlook: inkcazo
Ukuseta i-Yandex imeyile kwi-Outlook ayiqulathanga nto inzima, kwaye ukuba awuyazi indlela yokuseta iiparameter ezichanekileyo, sicebisa ukuba ufunde eli nqaku. Ukuba u…
Indlela yokuvula iphepha kwi-Odnoklassniki kulula kwaye ilula
Iziza zonxibelelwano zithandwa kakhulu kwezi ntsuku. Iinethiwekhi zentlalo, ukongeza kwimisebenzi yolonwabo, zithwala amathuba amaninzi onxibelelwano. Ngaba akunomdla ukujonga umntu o ...
U-odola njani kwiTaobao - imiyalelo eneenkcukacha. Ivenkile yaseTshayina "iTaobao": uphononongo kunye nokuhanjiswa
IsiTshayina samkelwe njengolona lwimi lunzima kakhulu emhlabeni, kodwa wonke umntu ubonakala elazi igama elithi "Taobao". Esi sisigebenga esibonakalayo, indawo yentengiso ekusekwe kuyo iivenkile ezininzi ezikwi-Intanethi. Abantu abanolwazi banokukuxelela indlela yoku-odola ...
Yintoni ukugcwala kwi-Intanethi: amagama amabini aqhelekileyo
Kungekudala okanye kamva, nawuphi na umsebenzisi womnatha uya kufumanisa ukuba yeyiphi na i-intanethi kwi-Intanethi. Ngokubanzi, siya kuzama kwaye siza kukuxelela ngale nto. Ukugcwala kwe-Intanethi sisixa solwazi, esiphumayo kunye ...
Incwadi yencwadi ngu ... Ukuyilwa kwencwadi yophawu. Uphuhliso lweencwadi zebrand
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 09.11.2019
Ukubaluleka kophuhliso lwesazisi esimanyeneyo kukufumana ukuqonda okungakumbi nangakumbi phakathi koosomashishini. Ukwamkelwa kwenkampani ngeempawu ezihlanganisiweyo, imibala, ilogo kuzisa inzuzo yokwenene. Ukuze ungathembeli kwithuba, kufuneka usebenze kakuhle kuyo yonke into ...
Isilumkiso kwi-Intanethi kwintengiso ngaphandle kwezincamathiselo: inkcazo, uphononongo. Isilumkiso kwi-Intanethi ngokubukela iintengiso
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 31.12.2019
Ithuba lokufumana imali elungileyo kwi-Intanethi inomdla kubantu abaninzi, ngakumbi kwabo baneengxaki ezithile ngengqesho yesiNtu. Izizathu zinokubaluleka okanye zifikeleleke, kodwa oko akuthethi ...
URiley - uthetha ukuthini? Uyiqonda njani kwaye uyisebenzisa njani?
Kutshanje, i-Internet slang iqalile ukwenza indlela yayo nakwindlela yokunxibelelana nabantu, kwaye abanye abanxibelelanisi (ngakumbi ulutsha) banokukhetha ukuthi hayi "enkosi" okanye ubuncinci "enkosi", kodwa bathi ...
Yintoni ukujonga kwakhona? Iindidi zokujolisa kwakhona
Kuyenzeka ukuba emva kokundwendwela indawo, emva kwethutyana, xa usebenza kwakhona kwi-Intanethi, intengiso yezo mpahla kunye neenkonzo ezibonwe ngumsebenzisi ziyavela. Ukujonga njani oku: ukuqondana okanye intshutshiso? Hayi,…
Yonke into njengoko injalo ngokwenene: itikiti.ru. Uphengululo
Namhlanje kukho inani elikhulu leziza, apho unoku-odola okanye ubhukishe iinqwelomoya ngokuhanjiswa kwekhaya. Enye yazo ithikithi.ru, uphononongo lwayo luzele yindumiso, ...
Khangela kwisiza ngeGoogle kunye neYandex. Iskripthi sokukhangela indawo
Okukhona ubutyebi bakho buzaliswa lulwazi olutsha, kokukhona kuya kufuneka ukuba ukhawuleze, kufuneka ukhangelo olucwangcisiweyo. Kukho iindlela ezininzi zokwenza oku. Indlela yokuqala iphakamisa ukusebenzisa izixhobo ezakhelweyo kwi-CMS yakho. Isibini…
Beats7.ru: uphononongo lwevenkile
Sisebenzise ukuthenga i-elektroniki kwi-intanethi. Unyaka nonyaka abantu abaninzi bayatshintsha baye kuthenga kwi-Intanethi, beqonda ukuba kwi-Intanethi ungathenga izinto ezifanayo ngesaphulelo esibalulekileyo. Kwakhona, apha ...
Page 1 Page 2 ... Page 92 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-6,192.